Shine and Find Ny Vokatra Fanabeazana - Famolavolana
Ny Vokatra Fanabeazana
Ny Vokatra Fanabeazana Ny tombony lehibe indrindra amin'ity vokatra ity dia ny fanamorana ny fahalalana sy ny fanatsarana ny fitadidiana. Ao amin'ny Shine and Find, isaky ny Constellation dia vita avokoa ary io fanamby io dia zatra miverimberina hatrany. Mahatonga sary maharitra izany ao an-tsaina. Ny fianarana izany fomba izany, azo ampiharina sy mandalina ary miverimberina, dia tsy mankaleo ary mahatonga fahatsiarovana maharitra kokoa ary mahafinaritra. Tena mampihetsi-po, mifampiankina, tsotra, madio, kely sy maoderina.
Anaran'ny tetikasa : Shine and Find, Anaran'ny mpamorona : Mohamad Montazeri, Anaran'ny mpanjifa : Arena Design Studio.
Ny Vokatra Fanabeazana Mohamad Montazeri Shine and Find